[23 / 10 / 2019] Ankara Metrolarında X-Ray ve Metal Kapı Dedektörleri İle Güvenlik Üst Seviyede	06 Ankara
HomeTurkeyMpaghara Marmara16 BursaYenişehir Osmaneli Egwu Mgbapu Ozo nke Mbido Ogologo oge
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 16 Bursa, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey 0
N'ezie, sürpriz Ọ bụghị ihe ijuanya maka ndị na-agbasochi isiokwu a anya. N'akụkụ a, ịkagbu obi anyị mechara ụnyaahụ bụ ihe a na-elere anya na ya.
Isiokwu ya bụ:
TCDD 3 Tender maka Bursa-Osmaneli High train Train Project na Eprel 2018. Ihe eji aru oru di n'etiti Bursa-Yenişehir na superstructure na electromechanical na akụrụngwa Yenişehir-Osmaneli, nkwanye ugwu na ọrụ electromechanical sitere na ya.
Onyinye kacha mma nke na-enye 2 ijeri 520 pound nyere Aga Energy. Agbanyeghị, na June, Bayburt Construction Group meriri otu ọnụahịa ahụ.
Bayburt abụghị ụlọ ọrụ mba ofesi. Ọdụ mmiri 6 na mpaghara Mezitler nke Ankara bụ nke Bayburt wuru. N’ebe ahụ a na-ewu ,lọ Ọrụ ahụ, ndị isi ụlọ ọrụ ahụ gwara anyị na ha ebidola ịrụ otu akụkụ nke ụzọ okporo ụzọ Kars-Baku-Tbilisi.
Anyị hụrụ na ọ dị mma na ụlọ ọrụ ụgbọ oloko ahụmịhe were ụgbọ oloko niile na-agba ọsọ.
Ozugbo ekwuputara ọkwa dị nro, nsogbu akụ na ụba bilitere. Mgbe ego ahụ gbanwere na Dollar bilitere, ọnụahịa nke mgbanaka pensụl nke 2.5 ruru ihe karịrị ijeri 4.
Dị ka ndị ...
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, mgbe ọnụahịa ahụ mụbara na ọnụego a na-atụghị anya ya, onye ọrụ ngo achọghị ịmalite ọrụ. Dị ka o kwesịrị ịdị, onye ahụ bi na ya agbapụtaghị ebe ahụ.
Na usoro ahụ O
Ndị na-agụ akwụkwọ a na-aga n'ihu na-agụ na "ụgbọ oloko anyị dị elu agbagidere na nchekwa" nakwa na a kwụsịtụrụ ọrụ ahụ. N’aka nke ozo, ndi n’enweghi ncheghari njem ndi ozo n’abia nke na ebido na 2019 üler tinyere echiche ha n’ahịrị.
Na ebe Gelin
14 Septemba Dị ka nke 2019, anyị kwupụtara kagbuo 3 April dị na kọlụm ndị a ụnyaahụ. Ndị nwere mmasị n'okwu a, ọkachasị uche ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na-anabata ya dịka ihe ịtụnanya ma ghara zoo ihe ịtụnanya ha.
O doro anya na nke a ga-arụpụta. Ya mere, enweghi nnukwu ihe ijuanya.
Nas Howl kedu ka akagbuo akụrụngwa a ga-esi rụọ nnukwu ụgbọ elu Bursa ọsọ? ”
N'ikwekọ na ozi anyị nwetara, anyị ekwuola:
T TCDD makwaara na enweghi ike ikwusi ihe nkpuchi. Ya mere, a na-amalite ịkwadebe maka ọmịiko ọhụrụ na ọnọdụ ọhụrụ ozugbo. ”
"N'ọdụ ụgbọ elu dị elu anyị dị njikere afọ 2023-2025, ugbu a 1 ma ọ bụ 2 ga-egbu oge site na afọ ọzọ."
Ọ bụrụ na ego mmachi akpa ezu, a ga-edozi nsogbu ahụ?
Anyị abụghị ndị ọrụ sayensị… Anyị bụ naanị ndị odeakụkọ na-anwa ịgbaso ihe omume ma kesaa ya na kọlụm ndị a. N'aka nke ọzọ, enwere ndị enyi kwuru na ha nwere nchekwube na "Enyego ọfụba karịrị, ọ na-akwụsị n'oge."
Ha ziri ezi n'agbanyeghị, enwere ụzọ ụgbọ oloko n'okporo ụzọ ụgbọ elu Bursa-Osmaneli dị elu. Ejiri mgbidi 16 nke ngụkọta kilomita 9 dị n'agbata Bursa na Yenişehir. Enwere ngụga kilomita kilomita 8 dị n'etiti Yenişehir na Osmaneli.
Ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma na ọwara, enwere ike ịgbari mita 4 kachasị elu kwa ụbọchị. Ọ bụrụgodi na ego mmachi akpa na-abịa, ezughị ezu ịrụcha ọrụ ahụ. (Ahmet Emin Yilmaz - omume)
Ntụle na-atụ egwu: Yenişehir-Osmaneli na Yenişehir-Bozüyük Nyochagharị ụgbọ okporo ígwè na Nyocha Ọrụ 21 / 11 / 2014 Akdeniz-Osmaneli na Akdeniz-Bozüyük Railway Studies Project na Consultancy Services ga-natara REPUBLIC steeti ụzọ ụgbọ okporo ígwè nchịkwa isi ụlọ ọrụ (TCDD) General Directorate Akdeniz-Osmaneli na Akdeniz-Bozüyük Railway Gọọmenti, Project na Consulting maka izu ọrụ azụmahịa, na-agwa ezu na ahụmahụ na-aga ime na-akpọ gị ka ị rịọ maka ịhazi. Nga nzere nwale pụta amaka n'etiti ndị kpebisiri ike na dị na njikere òkè na 4734 Iwu Nke 5 nke merenụ ndokwa ẹdude ke Site ewu ewu dị ka ibiere kpọmkwem na tupu nzere nkọwa ga-kpọrọ ịsị na obere ndepụta ga-ọdịda site obi usoro n'etiti ụfọdụ bidders. Ndebanye Ndebanye Ndebanye Obi: ...
Yenişehir - Osmaneli na Yenişehir - Bozüyük Railway Survey, ntinye aka na ọrụ ndị ọkachamara na-enye ndụmọdụ 19 / 12 / 2014 TCDD Akdeniz - Osmaneli na Akdeniz - Bozüyük Railway Project Study, oru ngo na consultancy ọrụ na-anakọtara site n'itinye tupu nhọrọ nke ntinye ikwe ọnụ Turkish State Railways (TCDD) Enterprise Directorate General, "Akdeniz - Osmaneli na Akdeniz - Bozüyük Railway Gọọmenti, Project na Consulting Service" obi a na-anakọta 11 December 2014 ụbọchị nhoputa oge. Dị ka ozi natara Investments Magazine; Ụlọ ọrụ ndị na-etinye maka nhọrọ maka nhọta bụ: 1. Altinok Consultancy 2. Arcadis - Tümaş Turk 3. Botek 4. Emay Engineering 5. Erka-AS - Koba Eng. 6. 7 Engineering Geodata. Getana - İnpro Müh. 8. Grontmij ...
Yenişehir - Osmaneli na Yenişehir - Bozüyük Railway Survey na ụlọ ọrụ na-ewu ewu ka a gwara ha ka ha nyefee ọmịiko tupu ha ahọrọ. 19 / 02 / 2015 TCDD Yenişehir - Osmaneli na Yenişehir - Bozüyük Railway Project 20 rịọrọ ka ọ kpọọ ndị mmeri nke nchịkọta nhọrọ nke nyocha ahụ, ọrụ ngo na ọrụ ndụmọdụ ruo 2015 11. na Yenişehir - Bozüyük Rụgharịrị ụgbọ okporo ígwè, Nyocha na Nyochaa Ọrụ nlezianya nyocha. Dị ka ozi ndị Investments Magazine natara; Ejiri ụlọ ọrụ ndị meriri tupu ịhọrọ nke obi ebere ka ha kwado ruo 2014 na 20 March 2015. E kpebiri ndepụta ndị mmeri dị ka ndị a: 10.00
Yenişehir - Osmaneli na Yenişehir - Bozüyük Railway Project Survey, nchịkọta ọrụ na ọrụ ndụmọdụ 26 / 03 / 2015 TCDD Akdeniz - Osmaneli na Akdeniz - Bozüyük Railway Project Study, oru ngo na consultancy ọrụ obi na-enye na-anakọtara Turkish State Railways (TCDD) Enterprise Directorate General site 11 December 2014 ụbọchị ngwa anakọtara, "Akdeniz - Osmaneli na Akdeniz - Bozüyük Railway Gọọmenti, Project na Consulting ọrụ "nke obi enye ke March 20 2015 ụbọchị anakọtara. Dị ka ozi natara Investments Magazine; Mgbe ọmụmụ nnyocha a gasịrị, a ga-emeghe ego mkpuchi nke ụlọ ọrụ ndị a hụrụ na ha kwesịrị ekwesị. Achọpụtara ndị bidders ahụ dị ka ndị a: 1. Altinok Consultancy 2. Botek Inc. 3. Mescioğlu Engineering 4. Protek - Mega Eng. 5. The Proyap ...
Yenişehir-Osmaneli na Yenişehir-Bozüyük Railway Project Envelopes ego nke nyocha na oru ngo meghere 14 / 05 / 2015 TCDD Yenişehir-Osmaneli na Yenişehir-Bozüyük Railway Project Ndị isi nchịkwa nke nchịkwa na ntinye ọrụ nke ụlọ ọrụ (TCDD) malitere na 20 March 2015. Envelopes ego nke 08 obi ụtọ meghere na May 2015. Dị ka ozi natara site na Investments Magazine; Ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ nchịkwa na onyinye ego (TL) nke ụlọ ọrụ ndị enwere ego ha na-emeghe n'ime obi ebere bụ ndị ọnụahịa ha kpebiri dị ka TL 8.247.032 dị ka ndị a: Nkọwapụta Nyocha Ahịa 1. Altinok Nyocha 87,12 3.998.000 2. Nyocha Engineer 92,30 5.428.486 3 Proyapı.
Ntụle na-atụ egwu: Yenişehir-Osmaneli na Yenişehir-Bozüyük Nyochagharị ụgbọ okporo ígwè na Nyocha Ọrụ
Yenişehir - Osmaneli na Yenişehir - Bozüyük Railway Survey, ntinye aka na ọrụ ndị ọkachamara na-enye ndụmọdụ
Yenişehir - Osmaneli na Yenişehir - Bozüyük Railway Survey na ụlọ ọrụ na-ewu ewu ka a gwara ha ka ha nyefee ọmịiko tupu ha ahọrọ.
Yenişehir - Osmaneli na Yenişehir - Bozüyük Railway Project Survey, nchịkọta ọrụ na ọrụ ndụmọdụ
Yenişehir-Osmaneli na Yenişehir-Bozüyük Railway Project Envelopes ego nke nyocha na oru ngo meghere
Yenişehir - Osmaneli na Yenişehir - Bozüyük Railway Project Survey na nkwado nke UBM A.Ş. mERIRI
Yenişehir - Osmaneli na Yenişehir - Bozüyük Railway Project UBM A.Ş. banye nkwekọrịta
TCDD Bandırma - Bursa - Ayazma - Osmaneli High Speed ​​Train Project Ego envelopes maka nlekota oru na ndi nlekọta maka oru ngo nke Bursa - mpaghara nke Yenişehir
TCDD Bandırma - Bursa - Ayazma - Osmaneli High Speed ​​Train Project, Bursa - Yenişehir ngalaba akụrụngwa nlekọta ọrụ na nlezianya ndụmọdụ ka a ga-eme ka nkwenye nke Board of Directors
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa October 2019 (428) September 2019 (555) August 2019 (508) July 2019 (633) June 2019 (504) Mee 2019 (526) April 2019 (418) March 2019 (521) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (620) November 2018 (504) October 2018 (435) September 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (581) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (542) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (535) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Ogwe 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (771) September 2014 (598) August 2014 (808) July 2014 (911) June 2014 (735) Mee 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (830) September 2012 (886) August 2012 (974) July 2012 (863) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)